Glass nechirongo Factory - China Glass nechirongo vagadziri, bhizimisi
Makara lotus girazi chemwenje
Chigadzirwa chigadzirwa: girazi, gobvu uye yakasimba.
Chigadzirwa chigadzirwa; pinki, amber, chingokwesha nemucheka wakachena wakasviba kana kuwedzera shoma sipo yekudzivirira mwenje wezuva-refu.
Kuiswa kwechigadzirwa: imba yekutandarira, yekurara, yekudzidza, yakaiswa mukona yekona imba yemumba yechic, ichigadzira yekudanana imba mamiriro.
Chigadzirwa dhizaini: kuvezwa kwakapfava, hwaro hwakakora uye hwakagadzikana, uye chigadziko chemwenje hachisi chekushongedza chete asiwo nzira yehupenyu.
1000ml yakajeka girazi yekuchengetera tangi
♦ Zvishandiso - Zvigadzirwa zvisina girazi-zvisina gwara, zvakachena uye zvakajeka, zvine hutano uye zvine hushamwari, zvinogona kuchengetedza yakawanda nzvimbo yekicheni yako uye kabhodhi, nokudaro uchiwana kurongeka kwekicheni kurongeka;
♦ Ichengete iri nyowani uye isina mvura - Iyo isina simbi muvharo dhizaini inowedzera iyo yekuisa chisimbiso kwechikafu kunogona kuchengetedza chikafu chitsva uye chisina mvura;
♦ Yakasiyana-siyana - Kicheni mudziyo wekuchengetera chikafu wakanakira kuchengetedza zvakasiyana siyana, zvinosanganisira macandi, nzungu, zvinonhuwira, oatmeal, zviyo, mabhisikiti, tii, mukaka upfu, pasita, bhinzi kofi, nezvimwe.
♦ Shandisa nguva - Inogona kushandiswa muzvitoro zviri nyore, maresitorendi, kicheni dzekumba, nezvimwe, zvinoshandiswa zvakanyanya;
Ruva rejotus rinomiririra rugare, kuchena uye kujekeswa.
Crystal Lotus Maruva akanakisa mafambisi esimba.
Isa ino kristaro padyo nepahwindo mumba mako kuti ubate zuva rakananga kupenya parutivi chero rusvingo. Iyo kristaro ichapwanya mwenje wezuva uye inogadzira Rakanaka Dhoridhe mumba mako
Yakakura kune Chero Chiitiko kana Kushongedza Kudikanwa, Yakanyanya Yakanaka Inoshandiswa muKamuri yekurara, Kumba, seChipo, Mabhawa, Kafe, Mahotera, Muchato, Bato uye Dzimwe Nzvimbo dzeRudo.
7 Colors Crystal Girazi Lotus Ruva Kenduru Tea Chiedza Bata Buddhist Chigadziko